Ihe ndị a ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ihe nkedo carbide cimented
Mgbe ị na-ahọrọ ụrọ carbide cimented, a ga-ebu ụzọ buru ụzọ tụlee ihe ziri ezi nke nha chọrọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ka oghere nke a ga-ahazi na-adị ntakịrị, ka ntachi obi ahụ na-adị ntakịrị. Ya mere, ndị na-emepụta akuwa akuzinwo na-ahazikarị drills dị ka dayameta aha nke t ...
Nyocha banyere ọnọdụ dị ugbu a na mmepe nke ngwaọrụ ịkpụ ígwè
Ngwá ọrụ ịkpụ bụ ihe eji egbutu igwe na-emepụta ihe. Ọtụtụ n'ime mma bụ igwe eji eme ihe, mana enwerekwa nke ejiri aka mee. Ebe ọ bụ na a na-eji ngwá ọrụ a na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ígwè, a na-aghọtakarị okwu ahụ bụ "ngwaọrụ" dị ka ...
Alloys ebe nchekwa ihe (SMAs) nwere nzaghachi nrụrụ agwa maka mkpali temomechanical. Thermomechanical stimuli sitere na okpomọkụ dị elu, mgbanwe, mgbanwe siri ike na nke siri ike, wdg (a na-akpọ usoro dị elu nke okpomọkụ dị elu austenite, na obere okpomọkụ dị ala phas ...
Akụkụ omenala & eyi, Carbide Punch ma nwụọ, Tungsten Carbide Vs Carbide, Dureza Del Titanio, Nkọwapụta Cnc Machining China, Akụkụ Carbide Yiri,